Raspbian yakagadziridzwa uye inowedzera rutsigiro rweiyo Raspberry nyowani | Linux Vakapindwa muropa
Darkcrizt | | Updated on 31/03/2018 22:47 | Kugoverwa
La Raspberry hapana mubvunzo chishandiso chakawana mukurumbira wakawanda pakati pevashandisi veLinux uye hazvisi pasina, asi nekutenda pamitengo yayo inowanikwa uye kuwedzerwa mukukura kwayo nguva dzose rave chigadzirwa chemhando yepamusoro.
Uye zvakanaka isu tinofanirwa zvakare kuwedzera iyo hombe nhamba yemapurojekiti aripo eRaspberry, tine zvakawanda zvingasarudzwa kuti tikwanise kupa nzvimbo kune ichi chikuru chishandiso.
Kune akati wandei masisitimu echigadzirwa ichi, asi mune ino chinyorwa ngatitaurei nezve ayo ehurongwa system ndizvo zviri Raspbian OS.
Izvi sezvo iwe waigona kutora kubva pazita rayo Iyo Debian yakavakirwa sisitimu iyo yakagadziriswa yeRaspberry Pi sezvo chishandiso ichi chinoshandisa iyo armhf, ARM v7-A zvivakwa uye mune avo akasiyana mavhezheni.
Raspbian OS ine shanduro mbiri pakati pedu patinogona kusarudza:
Raspbian Pixel: Iyi vhezheni ndiyo izere kwazvo sezvo iri iyo inosanganisira mamiriro emifananidzo, iyi vhezheni ndiyo inowanzo shandiswa nevashandisi ve desktop.
Raspbian Lite: Iyi ndiyo yakadzikiswa vhezheni yesystem nekuti haina grafiki nharaunda, saka inongova neconsole mode, iyi vhezheni ndiyo inoshandiswa kumaseva-mhando mabasa uye ayo anowanzo sanganisira mune mazhinji emapurojekiti anofanirwa kuita nezvinoenderana nekugadzira ma multimedia maseva nechishandiso.
Shanduro yacho Raspbian OS Pixel inoshandisa LXDE desktop nharaundaIzvi zvinosanganisira maturusi akati wandei ekuvandudza akadai seIDLE yeiyo Python kana mutauro wekuronga.
Kana ari webhu browser inowana Midori, isu tinowanawo menyu "raspi-config" izvo zvinotibvumidza isu kumisikidza iyo inoshanda sisitimu pasina yekugadzirisa mafaira ekugadzirisa nemaoko.
Pakati pemabasa ayo, iyo inokutendera iwe kuti uwedzere iyo ROOT partition kuitira kuti igone iyo yese memory kadhi, kugadzirisa iyo keyboard, kuisa overuls, nezvimwe.
1 Raspbian yakagadziridzwa
2 Dhawunirodha Raspbian 2018-03-13
Iyo system yakagadziridzwa mazuva mashoma apfuura, izvi nekuda kwekuuya kwazvino kweiyo modhi nyowani yeRaspberry pi iri Raspberry Pi 3+Uye zvakare, neshanduro iyi nyowani vanosanganisira matsva mabasa, mapakeji nyowani uye pamusoro pese kururamisa kwemakanganiso.
Nguva rimwe rematambudziko makuru izvo zvakawana kukura kweRaspbian ndiro dambudziko rekuenderana yeaya maficha nemhando dzakasiyana dzeaprosesa ayo avanobata mune yavo dzakasiyana Raspberry mharidzo.
Zvakanaka, sezvo kuzvipira kune Raspbian ndeyekuti inoshanda zvizere nechero vhezheni yeRaspberry.
Muenzaniso unoshanda ndeweChromium uyo usisiri kuenderana neARM6 processor, iri mukati meRaspberry Pi 1 uye Pi Zero.
En iyi nyowani nyowani yakashandawo nema resolution escreenSezvo pakutanga iwe wakashanda pamwe bhatani kugadzirisa zvese kune chakatemerwa kukosha, neizvi iwe wakashanda pane yakafanorongedzwa kumisikidzwa yezvikwiriso zveavhareji saizi.
Asi ikozvino nyowani default tab ine dzakawanda sarudzo dzaverengerwa, iyo inogadzirisa saizi yefonti, saizi yekoni, uye mamwe marongero akasiyana kumaitiro anofanirwa kushanda nemazvo pakakwirira- kana pasi-resolution resolution.
Pamwe neichi chishandiso, sarudzo yakawedzerwa iyo inobvumidza kutsigira yakakwira resolution resolution, iyi sarudzo inonzi pixel yakapetwa kaviri.
Isu tinoriwana pazasi peSystem tab, mune iyo Raspberry Pi Zvishandiso application.
Chikonzero icho chakawedzerwa chaive seinotevera:
Isu takasanganisira iyi sarudzo kuti zvive nyore kushandisa iyo x86 vhezheni yeRaspbian ine ultra-yakakwira resolution resolution ine mapikisheni madiki kwazvo, senge Apple's Retina inoratidzira. Pakumhanya desktop yedu pane chimwe cheizvi, kushomeka kwemapikisheni kwakaita kuti chinhu chose chidiki kuti chishandiswe zvakanaka.
Dhawunirodha Raspbian 2018-03-13
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuisa iyi nyowani vhezheni iwe unogona kuenda kwa yayo yepamutemo webhusaiti uye dhawunorodha vhezheni yako yaunoda.
Kune rimwe divi, kana iwe uine iyo system yatove kuiswa uye iwe uchida kugadzirisa, iwe unongofanirwa kumhanyisa zvinotevera mune yako terminal.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Raspbian yakagadziridzwa uye inowedzera rutsigiro rweiyo Raspberry nyowani